जति सिक्यो, त्यति नै सिक्न मन लाग्छः मोडल रमिता भण्डारी| Nepal Pati
रमिता भण्डारी विगत १६ वर्षदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा छिन् । बिचमा केही समय यो क्षेत्रबाट अलग भएपनि फेरि यही क्षेत्रमा जम्ने जमर्को गर्दैछिन् । गीत गाउने, अभिनय गर्नेदेखि अभिनय सिकाउनेसम्मको काम उनले गर्दैआएकी छिन् । इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा समेत उनको दख्खल छ । बहुमुखी प्रतीभाकी धनी गायिका, मोडल, कोरियोग्राफर तथा इभेन्ट अर्गानाइजर रमितासँग नेपालपाटी डटकमले गरेको कुराकानीः
के मा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि ?
मेरो तेस्रो एल्वम ‘सानी नानी’ भर्खर रिलिज भएको छ । त्यसको प्रमोशसनमा व्यस्त छु । त्यसका साथसाथै क्यानाडामा हुने च्यारिटी कार्यक्रमको तयारीमा पनि छु । क्यान एजुकेशन फाउण्डेशनको सहयोगार्थ क्यानाडामा कार्यक्रम हुँदैछ । क्यानले बालबच्चालाई निशुल्क पठाउँदै आएको छ ।
२०७४ मा तपाईले गायन र मोडलिङमा के के गर्नुभयो ?
बीचमा एक दुई वटा म्युजिक भिडियो बनाएँ । सवै गीत संग्रह गरेर नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा तेस्रो एल्वम ल्याएँ । फेशन शो पनि गरेँ । म्युजिकल प्रोग्राम पनि गर्दै आएको छु ।
तपाई यति धेरै क्षेत्रमा हात हाल्नुभएको छ, म्यानेज कसरी गर्नुहुन्छ ?
धेरै क्षेत्रमा हात हाल्दा अवश्य गाह्रो भइहाल्छ । तर म जुन काम गर्छु त्यसैमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छु, त्यो काम सकिएपछि मात्र अर्कोमा हात हाल्छु । भोकल क्लास पनि सिक्दैछु, इभेन्टको काम पनि गरिरहेको छु । कोरियोग्राफरको काम पनि गर्दै आएको छु । गाउने र मोडलिङ गर्ने त छदैछ ।
लामो समयभइसक्यो यो क्षेत्रमा लाग्नुभएको, अझै सिक्दैछु भन्नुहुन्छ । खासमा सिकाई कहिले सकिन्छ ?
गीतसंगित जति सिकेपनि पुग्दैन । जति सिक्यो, त्यति नै सिक्न मन लाग्छ । सिकाई त निरन्तर चलिरहन्छ ।
अहिलेसम्म कतिवटा गीतमा स्वर दिनुभयो र अभिनय कति वटा जतिमा गर्नुभयो ?
तीन वटा एल्वम निकालिसकेको छु । पहिले पनि मैले धेरै गीत गाएको छु । सन् २०१६ देखि अभिनयको क्षेत्रमा लागेँ । पहिला नै झण्डै २ दर्जन जति म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी थिएँ । बीचमा केही समय ग्याप भयो । पछिल्लो समय आफ्नै गीतमा अभिनय गर्दै आएको छु । अन्य गीतमा छानेर मात्र अभिनय गर्ने गरेको छु ।
तपाईले फिल्म चाहिँ किन खेल्नु भएन ?
सानैदेखि गीत गाउनमा रुची थियो । मलाई फिल्ममा रुची छैन । फिल्मा हुँदा प्रचार बढी हुन्थ्यो, तर म विस्तारै अगाडि बढ्ने सोचाईमा छु । छिटो चर्चामा आएर हराउनु भन्दा विस्तारै चर्चामा आउने र आइरहने मेरो सोच हो । निरन्तर काम गरिरहेको छु, हेरौँ के हुन्छ ।
२०७५ सालमा योजना के छ ?
इभेन्ट अर्गनाइजमै बढी समय दिन्छु । तीन÷चार वटा इभेन्ट गर्ने सोच छ ।
आजभन्दा १६ वर्ष अघि र अहिले के फरक पाउनुभयो ?
त्यो बेला प्रचारका लागि यति धेरै सुविधा थिएन । तर, अहिले फेसबुकको माध्यमबाट, युटुवको माध्यमबाट अनलाइन मिडियाको माध्यमबाट प्रचार गर्न सकिन्छ । पहिला छनोट भएर आउनुपथ्र्यो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सिक्न पनि पहिला गाह्रो थियो, अहिले धेरै सजिलो भएको छ ।
तपाईको लक्ष्य चाहिँ के हो ?
मिडिया क्षेत्रबाट पैसा कमाउँछु भन्ने सोच छैन । मेरो साइड बिजनेश पनि छ । गीत गाउनु चाहिँ मेरो रुची हो । फिल्म खोल्ने होइन, फिल्म बनाउने चाहिँ रुची छ ।